12 Talooyin Tafatir Degdeg ah oo loogu talagalay Baraha Bulshada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/12 Talooyin Tafatir Degdeg ah oo loogu talagalay Warbaahinta Bulshada
12 Talooyin Tafatir Degdeg ah oo loogu talagalay Warbaahinta Bulshada
Ma waxaad tahay maareeyaha warbaahinta bulshada, oo mas'uul ka ah qoraalladaada warbaahinta bulshada?
Ma ku qaatay shahaadada Ingiriisiga? Suugaanta? Suxufinimada?
Waa Maya. loo baahan yahay
Waxaad wax ka beddeli kartaa (oo qori kartaa) waxaad ugu baahan tahay qoraalladaada, ganacsigaaga, taageerayaashaada iyo kuwa raacsan.
Sida aad tahay.
Sidaad ogtahay, ereyga (wanaagsan ama xun) wuxuu isku dayi karaa xanaaq iyo xanaaq online. Waxaa roon inaad xakamayso kiiboodhkaga, si aad u xakamayso fariintaada, si aad u wanaajiso waxa laga sheegayo shabakadaha baraha bulshada.
Haddii kale, adiga iyo sumcadda ganacsigaaga waxaad qaadan kartaa guul. Sanado ayaad taas ku soo dhisaysay. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto waa in uu hoos u dhaco.
Xitaa ismaandhaafku wuxuu keeni karaa burbur. Waa kan mid…
JAPADOG waxay ka shaqeysaa gawaari cunto iyo maqaayado. Ujeedadooda: "adduunka ka dhig mid faraxsan oo ku noolow eyda kulul!"
Laakiin taageerayaashu aad ayay ugu faraxsanaayeen inay arkaan qoraalkan.
Iyadoo dadkii wax ka sheegayey iyo kuwii wax cunayey ay bilaabeen inay baroor diiqdaan xiritaanka bakhaarrada iyo gawaarida, JAPADOG ayaa soo gashay.
Waxay ahaayeen kaliya xidhidh maalintaas. Oh my.
Qalad qurxoon oo aan dhib lahayn? Laga yaaba markan. Laga yaaba in aanay ahayn wakhtiga xiga. Oo, si fudud ayaa looga hortagi lahaa.
Wax yar baa jid dheer. Taasi waa waxa qoraalkani ku saabsan yahay. Talooyin fudud si aad tafatirka uga dhigto mid degdeg ah oo aan xanuun lahayn ee bulshadaada, hab-socodka daabacaada.
8 tabaha tafatirka degdega ah ee maareeyayaasha warbaahinta bulshada
1. Laba indhood oo kale saar
Miyay JAPADOG ka ilaalin lahayd ceebta haddii ay marka hore qof ka codsadaan inuu caddeeyo jagada?
Way adag tahay in la hubo.
Laakiin fursadahaaga caddayntu si aad ah ayay u soo hagaagaysaa markaad caawimo waydiisato.
Way fududahay in la weydiiyo, waxay qaadataa hal daqiiqo ama saddex keliya qofka kale. Weydii qof kale inuu dhex maro boostadaada iyo tweets ka hor inta aanad sii deyn.
Ma waxaad tahay bandhig hal qof ah? Fiican Raxmad weydiiso saaxiib ama qof kasta oo kugu dhow. Ha samayn taas "Ma doonayo inaan cidna dhibo" ama "aniga lafteydu waan xamili karaa" shay. Maxay saaxiibo u yihiin, sax?
Ma laga yaabaa inaad qayb ka tahay koox yar? U sheeg kuwa kale inaad haysatid dhowr qoraal oo aad ku dhejiso. Dhab ahaantii, tan u dhis mid joogto ah qof kasta oo wax uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda.
2. Isticmaal kaftan. Waxaa laga yaabaa in.
Si sax ah loo sameeyay… baraha bulshada + kaftan yar = taageereyaal la maaweeliyo.
Si sax ah looma yeelin… waxaad xumayn kartaa, kor u qaadi kartaa, oo aad laali kartaa kalsoonida akhristaha ee sumaddaada.
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad caddayso, oo aanad xariif ahayn.
Qof kasta oo ku jira adeegga macaamiisha ayaa kuu sheegi doona, dadka ku jira khadka lacag-celinta waa dad adag.
Sidoo kale, uma baahni in aan ku xasuusiyo kaftan ku saabsan qowmiyadda, jinsiga, heerka dhaqaalaha, ama mawduucyo kale oo gaar ah. Sug, waan ku xasuusiyay.
Aad bay ugu xun tahay Bar-sports ee Dave & Buster. Way tirtireen tweet-kan caanka ah ee hadda-laakin aad bay u daahday. Xakamaynta burburka.
Sawir ka yimid Twitter oo loo sii marayo AdAge
Dhanka farxadda… waa kan tusaale wanaagsan oo kaftan dhab ah.
Waxaan sameeyay shaxda socodka si ay kaaga caawiso inaad doorato dhadhanka MoonPie ee ay tahay inaad cuntid pic.twitter.com/1uuETszlW5
- MoonPie (@MoonPie) Maajo 2, 2019
Markaad dhejinayso, waxaa habboon in la is weydiiyo, "Nafta, tani ma ka dhigaysaa akhristuhu inuu na raaco?"
Si taxadar leh oo fikir leh uga fiirso dhagaystayaashaada. Markaa waxaad heli kartaa hab aad cidhifkaaga geliso qoraaladaada iyo summadaada.
Qof kastaa wuxuu rabaa inuu ku raaxaysto qosolka, waa hab fiican oo lagu faafiyo ereyga.
Laakin ma aha haddii ay tahay qof kharashkiisa.
3. Dib u qor waxa madmadowga ku jira
JAPADOG waxa uu bartay habka adag, sida madmadowgu u abuuro jahawareer.
Kahor intaadan garaacin daabacaan badhanka… is weydii haddii wax aad qortay u egyihiin ama u egyihiin 'off' ama aan caddayn.
Kor u akhri, sidoo kale. Tani waxay sii gelin doontaa maskaxdaada iyo caqligaaga. Ha noqon qof xishood badan, qofna ma maqlayo - marka laga reebo adiga iyo maskaxdaada.
Halkan waxaa ah tusaale wanaagsan oo madmadoow ah.
"Waxaan kulmi doonaa todobaad kasta si aan dib u eegno oo aan u nadiifino jadwalkayaga dhajinta."
Hmmmm... markaa dhammaantiin ma kulmi doontaan laba jeer toddobaadkii? Mise labadii toddobaadba mar?
Laba toddobaadle: todobaadkii laba jeer
Laba toddobaadle: Labadii toddobaadba mar
Waan ka xumahay taas. https://t.co/8FBUonz7yq
- Merriam-Webster (@MerriamWebster) Ogosto 6, 2016
Si loo caddeeyo markaa… "Waxaan kulmi doonaa todobaadkii laba jeer..." ama, "Waxaan kulmi doonaa labadii toddobaadba mar..."
U helay? Dabcan waad sameyneysaa. Horey
4. Isticmaal qalabka iyo farsamada
Adigoo ah tifaftiraha guud ee warbaahintaada bulshada… ma haysaa wax aad tiraahdo, sax?
Hubaal, qoraal weyn ayaa laga yaabaa inay qaadato karti iyo hal-abuurnimo la dhalan karo. Laakin looma baahna in la wargeliyo, lagu maaweeliyo, ama laga dhaadhiciyo akhristaha inuu tallaabo u qaado qoraalladaada.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin qoraal oo wanaagsan iyo qalab kaa caawinaya waxaas oo dhan.
Khaasatan (drum roll fadlan)… App-ka Hemingway
Abka Hemingway wuxuu kaa dhigi doonaa qoraa wanaagsan. Muddada
Ka saar jargon Weedho soo gaabin. Ka saar tibaaxaha aan loo baahnayn. Ku jooji sifada sare. Ku qor codka fir fircoon ee ma aha dadban.
Waxaas oo dhami way baxayaan markaad wax u qorto sida Ernest uu sameeyay.
5. Wax ka baro dadka kale
Fikradayda aan aad u-hoosaysiin… maareeye kasta oo warbaahinta bulshada waa in uu hagaajiyaa farsamadiisa isticmaalka erayada.
Waxaan kor kuugu soo gudbiyay talooyin iyo qalabyo qaar.
Hadda. Waxaan kuu tilmaamayaa 17 qoraa oo waaweyn oo ku yaal Twitter si aad u hesho tilmaamo qoraal oo fudud.
Raac dhowr ka mid ah. Kaliya waxay qaadataa dhowr daqiiqo wiiggii si aad u barato khiyaamo yaryar oo keeni kara natiijooyin waaweyn.
Waa kan mid.
Orodku waxa uu i xasuusinayaa qoraal. Marna ha rabin inaad bilowdo. Marna ha rabin in la joojiyo. pic.twitter.com/QWAUurVsmg
- Jeff Goins (@JeffGoins) Luulyo 22, 2019
Culayska ku baro boggiisa Twitter-ka, qoraallada blog-ga, iyo muuqaallada. Jeff wuxuu muujinayaa sida uu u sameeyo, si aad sidoo kale awooddo.
6. Abuur nuxur ay akhristayaashaadu daneeyaan
Qor wax cad oo aan mugdi ku jirin.
Isticmaal kaftan marka ay macno samaynayso.
Hel qof caddeeya erayadaada.
Waxaas oo dhan iyo in ka badan ayaa ah dhaqamo wanaagsan.
Laakiin maxay tahay faa'iidada samaynta iyo habaynta haddii qoraalkaagu aanu u qalmin in la akhriyo?
Qayb ka mid ah shaqadaada tifaftire ahaan waa inaad barato waxa dhiirigeliya dhagaystayaashaada. Markaa waxaad siin kartaa wax badan oo ay u hanqal taagayaan.
Waxaan wax ka qornaa waxaas oo dhan, mar walba. Waa kuwan dhawr qaybood oo kaa caawin doona adiga iyo kooxdaada inaad wax badan ka bixisaan waxa shaqeeya:
Baro waxa ay bixinayaan tartamayaashaadu
Abuur xeelad bulsho oo ugu yar
Qor wicida ficilada soo jiidashada leh
Cabbir waxa shaqeeya, waxa aan shaqayn
Samee codka astaantaada
Sababta iyo sida loo isticmaalo hashtags
Xidhmo yar oo fiican, haa? Taasi waa haddii aad akhrido oo aad ku darto qaar ka mid ah (ama dhammaan) dhaqamadan DNA-gaaga warbaahinta bulshada.
7. La tasho hagahaaga qaabka
Waa maxay, hagaha qaabka?
Si aad shakhsiyadda ugu durto astaantaada
Si aad u muujiso habka saxda ah, dhammaan akoonnadaada bulshada
Si aad ugu qorto cod iyo cod joogto ah
Si degdeg ah loogu dul fuulo qorayaasha cusub
Hadda, waxaa laga yaabaa inaad ku fekereyso, "laakin waxaan nahay shirkad yar."
Haddaba waa maxay. Hagaha qaabku waa kheyraad aad u wanaagsan in la abuuro, la haysto, lana tixraaco.
Mana adka in la abuuro.
Baro sida loo abuuro hagahaaga qaabka.
Waxyaabaha mudan in la ogaado waxaa ka mid ah…
Ururi dhammaan xisaabaadkaaga bulshada
Isticmaal erayada saxda ah
Go'aami waxa (iyo goorta) la dhejiyo
Ogow sida ay wax walba u egyihiin
Waxaad heshay fikradda…
Kordhi hagahaaga markaad socoto, bisli qaabkaaga markaad koraan.
8. Sheeg sheeko (maya, runtii)
Waa maxay tibaaxo jilicsan. Waxaan maqalnaa mar walba qoraalka qoraalka iyo suuq-geynta.
Laakiin maxay ka dhigan tahay runtii? Sidee bay u caawisaa? Sidee u sheegtaa?
Waxaan ahay taageere sare oo ka mid ah qaab-dhismeedka astaanta sheekada Donald Miller iyo buugga, Dhismaha Astaanta Sheekada, ee horumarinta farriinta ganacsiga.
Waxaan u isticmaalaa inaan ku qoro bogag, iimaylo, qoraalo, soo jeedin iyo ku dhawaad ​​​​wax kasta oo kale si aan ugu qanciyo akhristayaasha inay tallaabo qaadaan.
Qorayaasha qoraallada filimada ayaa sidaas oo kale sameeya si ay u soo jiitaan oo ay u ilaaliyaan dareenka daawadayaasha. Waxay tan wadeen tan iyo bilowgii wakhtiga. La mid ah buugaagta.
Sheekooyinka intooda badani waxay u dhacaan sidan ...
Waxaa jira dabeecad
Waxaa jira nin xun
Xumaanta ayaa dhibaato u horseedaysa dabeecadda
Dhibaatadu waxay saamaysaa dabeecadda dibadda iyo gudahaba
Dabeecaddu waxay la kulantaa hage
Tilmaamuhu wuxuu muujinayaa dareen
Tilmaamuhu wuxuu muujinayaa xigmadda
Tilmaamuhu wuxuu siinayaa qorshe
Hagaha ayaa ugu baaqaya inay wax qabtaan
Sheekadu (ama cutubka ama goobta) waxay ku dhammaataa guul
Jilaagu hadda wuu garanayaa sida looga fogaado fashilka mustaqbalka
Oo ka beddela kii hore una beddela nafta cusub
Tan maskaxda ku hay marka xigta ee aad daawato Star Wars, ama filim kasta oo kale.
Fariintaada tani waxay u turjumaysaa…
Ka dhig macmiilkaaga geesi, sida Luke Skywalker
Dhig summadaada hage ahaan, sida Yoda
Ku qaabbi bilawga fariintaada dhibaato, si aad u muujiso naxariis
Muuji sida aad u xalliso dhibaatooyinkaas
Qorshe bixi, tallaabooyinka xiga ee akhristuhu waa inuu qaado
Muuji sida uu dareemayo akhristuhu ka hor inta aanad la kulmin
Muuji sida ay dareemi doonaan ka dib marka ay kula shaqeeyaan
Ganacsiyo aad u badan ayaa wax ka qora. Isku dayaya in ay naftooda u dhigaan sida geesiga. Isagoo ka hadlaya sida ay u fiican yihiin, sida ay u weyn yihiin alaabtoodu, iyo blah blah blah kale.
Dabool beddelka, wax ka qor aragtida akhristaha. Ka soo gudub 'annaga' iyo 'annaga' una gudub 'adiga' iyo 'kaaga'. Si cad u sheeg dhibaatada ay la kulmaan. Maskaxdu waxay rabtaa inay aaddo xalinta dhibaatada.
Tani waxay abuurtaa khiyaamo iyo riwaayad. Akhristayaashu waxay rabaan riwaayad. Akhristayaashu waxay rabaan caddayn.
Habkan waxaan u isticmaalaa dhammaan macaamiishayda. Adiguna waad awoodaa, adigoo ka bilaabaya saamiyadaada iyo qoraaladaada.
Waa maxay dhibaatooyinka aad u xalinayso macaamiishaada iyo taageerayaashaada? Akhri buuga. Waxay kaa caawin doontaa inaad si cad u hesho ganacsigaaga, si aad wax u qori karto (oo uga hadasho) ganacsigaaga. Oo ay ku jiraan qoraalladaada.
Qor, wax ka beddel, daabac, oo jadwal geli qoraallada dhammaan kanaalada warbaahinta bulshada addoo isticmaalaya Hootsuite. Hal dashboard waxaad ka abuuri kartaa oo wadaagi kartaa nuxurka, ka qaybgeli kartaa dhagaystayaasha, la socon kartaa wada sheekaysiga khuseeya iyo tartamayaasha, cabbiri kartaa natiijooyinka, iyo wax badan oo kale. Isku day bilaash maanta!
Dhammaan siyaabaha loo qaado shaashadda iPadOS
Dib-u-dejinta WordPress Plugins si loo Nadiifiyo Boggaga